Ubisi luyimveliso ephikisanayo. Njengoko uyazi, ukuthatha abantu emva kweminyaka engama-30 akucebisekanga, njengoko kutyhafile isisu. Lo mbuzo awulula, kuba abaninzi abantu badla ubisi bonke ubomi babo kwaye bayibhekisela kwimveliso ekhonza njengelungileyo endaweni yamachiza. Kubalulekile ukuqonda ukuba yintoni inzuzo kunye nobungozi obisi.
Izinzuzo zobisi, ngenxa yesiqulatho esityebi sezondlo.
Abaninzi bayazi ukuba ukwenziwa kobisi kubandakanya izinto ezifana ne-calcium, i-phosphorus nezinye izinto ezibandakanyeke ngokukodwa ekwakhiweni kweeseli kwingqondo, vumela ukuba inkqubo ye-nervous isebenze ngokupheleleyo.
Ukwenziwa kobisi kufaka iivithamini zamaqela B, A, D. Ndiyabulela kwiivithamini zeqela B, ukukhathala, urhulumente oxinezelekileyo ususwe, ulusu luhlaziywa, isakhiwo seenwele siphuculwe, i-dandruff iyafa. I-Vitamin A inegalelo ekulondolozeni umbono, kodwa i-vitamin D ikuvumela ukuba ufumane ikhalsiyamu kunye ne-phosphorus.
Iipropati ezinobungozi kunye nobungozi obisi obuncitshisiweyo, obunxweme, obunqamlekileyo.
Kuza kubekho, kukho iindidi ezininzi zeemveliso zobisi. Kwiivenkile unako ukufumana ubisi obunamanzi obusisiweyo kunye nobuncwane. Ukuba uzibuza ukuba "ukulimala" kunye "nzuzo" yobisi, kufuneka uqaphele ubisi, ophantsi kwonyango olunzulu lokunyusa, ukwenzela ukwandisa impilo yeshefu yale mveliso.
Inkqubo yokuzalisa inkunkuma yile ndlela ilandelayo: ubisi luya kutshisa kuma-135 degrees Celsius, emva koko luyakucinywa. Ngenxa yoko, ezininzi iintsholongwane ziyafa, kubandakanya ezo zincedo kumzimba, ezininzi iivithamini azigcinwa. Ubisi, egcinwe kwisitya esitywinwe, sigcinwa iinyanga ezintandathu.
Inzuzo enkulu kunazo zonke ingeniswa ngotisi olungagciniweyo. Apha, umkhiqizo wobisi uphisa kuma-degrees angama-70, okuvumela ukugcina ibhaktheriya kunye namavithamini. Impendulo yodwa kukuba le yobisi igcinwa ixesha elingaphantsi - malunga neentsuku ezili-1.5.
Ungakwazi ukudibanisa nobisi olumama-homogenized, oko kukuthi, ngokufanayo. Ngobisi obunjalo, amanqatha aphuhliwe kwiintlobo ezincinci ezincinane, ezazisasazwa ngokulinganayo kuwo wonke umthamo. Kwakukho isiphakamiso esithile sokuthi xa uhlambulula ubisi, ukungena emathunjini, kukhokelela kumonakalo kwimithambo yegazi, okukhokelela kwi-atherosclerosis, kwakunye nezifo ezihambelana nesimo senhliziyo. Ngombulelo kwizenzululwazi zanamhlanje, kwaboniswa ukuba ubisi olumama-homogenike lunamanqaku aphezulu ngokwaneleyo.
Izibonelelo kunye neziphumo eziyimveliso: yiyiphi "inkulu"?
Xa uthenge ubisi, thobela ingqalelo njengolu hlobo njengepesenti yeoli. Ubisi, obunamafutha aphezulu kakhulu, kungcono ukuba ungaphuzi ngenxa yenani elikhulu leekhalori kunye nokwenzeka kokunyusa izinga le-cholesterol. Kodwa ukuba uthatha ubisi lwe-powder, ke ayiqukethe nayiphi na into encedo.
Yonke imvelo yomntu ithwala ubisi ngendlela yayo. Abantu abangathathi ubisi kwifom yabo ecocekileyo kufuneka batshintshe le mveliso kwimveliso yobisi etyalisiweyo. Kukho abantu abasebenzisa ubisi kunokuba bathathe amayeza, kwaye oku kunceda.
Ngokuqhelekileyo, ubisi luzisa iintlawulo zawo kuwo wonke umntu, kungakhathaliseki ubudala. Ukuba umntu uphelele, kufuneka aphuze ubisi, equle inani elincinci leoli. I-Serum ilungile oku. Ubisi lungasetyenziselwa njenge-diuretic, ngeyona nto ichaphazela iinjongo.
Ukuba uthatha umzimba womntwana omncinci, ngoko uqulethe i-enzymes ekuvumela ukuba ubambe ubisi kakuhle. Kubantu abadala, ukuveliswa kwee-enzyme ezinjalo kubakho kwinani elincinci, ngoko ubisi bubi kakhulu.
Ngoko, imiba enxulumene nenzakalo kunye nenzuzo yobisi kufuneka ixazululwe ngumntu ngokwakhe. Ngoko ke, xa kwenzeka ukuba umzimba ungathathi umkhiqizo wobisi, kufuneka ushiywe, kwaye ukuba uthathwa, ngoko, ngokuchaseneyo, kufuneka ujabule ngokuzonwabisa.
Ibhali yeyona nto iyona mvelaphi engcono kakhulu yamavithamini
Ungayigcina njani inani lakho ngeeholide zonyaka?
Amaminerali kunye namavithamini kwiklabishi emhlophe
Ukugxekwa kweengcamango zesondlo ngeqela legazi
Iintlobo kunye neengxaki zemifuno
Indlela yokugqoka isitatimende-umhlobiso kwaye ungabonakali ucocekile: imithetho elula e-6
Biography kaVasily Makakovich Shukshin
Indlela yokusinda ingqumbo yomphathi?
NgoKhupha ikhalenda yezinwele zonyaka wama-2014: uhlangabezane nentwasahlobo!
Mozzarella kunye neetamatato
I-pastry ye-Puff ne-ham kunye noshizi
I-Stew ngenyama kunye nobhontshisi obuluhlaza ebhodweni
Amafritter avela kwi-oat flakes
Indlela yokukhusela: inzuzo kunye nokungalunganga
Iimveliso ezi-5 ezingenakudliwa ngokutya kwasekuseni
Ziziphi iimpawu ezithembekileyo ze-zodiac phakathi kwabantu?
I-Horoscope ngo-Septemba 2017 yabasetyhini
Indlela yokuxolela ukukhashelwa yindoda?